Ku dar: Lambarka 1234, Xinsongjiang Road, Songjiang Shanghai ， Shiinaha
Go'aaminta dhexroorka rivet, dhererka iyo furitaanka
Marka rivet, haddii dhexroorku uu aad u ballaaran yahay, abuuritaanka khalkhalka ayaa ka sii dhib badan, way fududahay in la sameeyo cillad bir ah xaashida. Taas bedelkeeda, haddii dhexroorku uu aad u yar yahay, awoodda rivetku kuma filna, taasoo keentay kororka tirada rivets iyo dhibka c ...
Faahfaahinta xiriirka lacagta
Xiriirrada lacagta isku dhafan waxay si ballaaran u tixraacayaan korantada iyo korantada furitaanka iyo xiritaanka korantada, isgoyska kala-goynta iyo taabashada, maxaa yeelay mashiinka biraha ee biraha xilligan la taabto wuxuu si fudud u soo saaraa kuleylka degdegga ah iyo dhimbilada, taasoo keeneysa barta taabashadeeda ...
Silig daawaha dahabka iyo qalinka, silig qalin qalin ah iyo silig naxaas ah, taas oo kafiican
Waad salaaman tihiin, Kusoo dhawow Shanghai ZHJ Technologies CO., Ltd.it ayaa kafiican hadaanay jirin kuwa haga saddexda qalab. Xaddiga siligga naxaasta ah ee soo noqnoqda yar ayaa waxyar ka weyn, xaddiga inta jeer ee aad u tiro yarna wuu yaraa, taas oo ka dhigaysa codka dhawaaqa taagan saddex-geesood oo leh ...
Codsiga Daawada Lacagta
Araajidaha ugu waaweyn ee alwaaxda qalinku waa: (1) Alxan-ku-saleysan qalin, oo inta badan ku saleysan silsilad isku-dhafan oo ku saleysan qalin-naxaas-zinc, sida taxanaha AgCuZn, taxanaha AgCuZnCd, taxanaha AgCuZnNi; Dahab Nickel qalin ah, daawaha naxaasta qalinka ah; Daawaha oo ay ku jiraan 90% lacag iyo 10% naxaas ah ayaa loo yaqaan lacagta sil ...
Waxqabadka shaqada ee xiriirka qalinka waa la horumarin karaa af
Si looga fogaado aawadeed inay xiriir gubasho lacag ahi jirto, terminal contact istaaga oo u ekaada qaab qaloocan, xiriir dhexdhexaad ah oo soo baxa. Marka qaansadu kuma dul soconeyso dusha xiriirka ee gubashada. Waa nooc ka mid ah noocyada xiriirka ee ka wanaagsan, dalabkiisuna aad u sii kordhayo. Shaqada pr ...
Tamarta ayaa ku urursan dusha sare ee xiriirka iyo nea
Nidaamka soo saarida Arc, xididka qaansada wuxuu soo saaraa geedi socodka jirka ee kuleylka ah sababtoo ah sii deynta tamar urursan ee dusha sare ee xiriirka iyo lakabka dusha sare, oo ay sababaan dhalaalida iyo uumiga qalabka xiriirka qalinka, tani waa lacag la xiriirida korontada. In jabinta hadda yar iyo gaaban ...
U gudbinta ilaalinta xiriirka iyo arrimaha xiriirka
Waan ognahay in gudbinta xiriirku ay ka naxariis badan tahay Mosfet-ka guud, xamuulka gudbinta ayaa aad uga weyn kan Mosfet. Qalabka caadiga ah ee loo yaqaan 'DC load load DC', xajinta DC iyo walxaha qarxa ee 'DC solenoid', kuleylka culeyska fekerka ah waa la xiray, boqolaal ama xitaa kumanaan volt oo xoog koronto gadaal u ah oo ay sababeen